ဖိုးညို: May 2015
ဘ၀တွေ ပုံအောပြီး လှမ်းခဲ့ကြတဲ့ ပဲ့တင်သံတွေ
သရုပ်ဖော်မှု အနုပညာတွေ ….။
မိုးရေစက်တွေထိကျလို့ လွင့်ဖွာကျလာတဲ့ လမ်းမတွေကို
၀ါကြင့်ကြင့် လမ်းဘေးမီးရောင်အောက်က စင်းစင်းလဲလှောင်းနေတဲ့
စက်ဘီးစီးနေကြတဲ့ မြို့ကလေးရဲ့ ညနေခင်းတွေ။
တို့အတူ ကဗျာတွေ ဖတ်ခဲ့ကြတယ်
တို့တတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့ပြီး ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတယ်
တို့အတူ ဘ၀ - အလှ - ရသ တွေကို ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။
နေ့စဉ် စကားပွင့်တွေကို ကောက်ယူခဲ့သလိုမျိုး
ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ သိမ်မွေ့စွာ စိမ့်ဝင်လာခဲ့ပြီ
အကုန်အစင် ပုံအောထားတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့။
ငါ့ကတော့ …. အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့။
သူ အခါတရာလွမ်းရင် တခေါက်လောက်တော့ သတိရစေချင်ခဲ့သတဲ့
ငါ …. အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့။
တိတ်တိတ်လေး ကြိတ်ပြီး ချစ်ခဲ့ဖူးသလားတဲ့
နင် ငါ့ကို မမေ့လိုက်ပါနဲ့ဟာတဲ့
ငါ …. အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့။
ဆယ်လမွန်ငါး ပြန်လာမယ့် ရေဆန်လမ်းမှာ သီတင်းကျွတ်ချင်သတဲ့
အဲဒီ ပါးချိုမ့်နဲ့ အပြုံးလှလှလေးကို ဒုတ်ဒုတ်ထိမြင်ခဲ့ရတာတောင်မှ
မာနတွေ ကြွေကျလို့ တမ်းတမ်းတတ ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူ
ကျနော်က လမ်းဘေးမှာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် တေးချင်းတွေ ဟစ်ကြွေးနေချိန်
ပစ္စည်းမဲ့ဆန်လှတဲ့ အိမ်လေးထဲက ငေးမောနားထောင်နေတက်သူ
ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်ထဲက ချစ်ခဲ့တဲ့ ချစ်ရမ္မက်တွေ
တမ်းတမ်းတတ အတန်းဖော်ငယ်သူငယ်ချင်း ချစ်သူမလေး
သချာင်္ အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ
တခန်းတည်း တတန်းတည်း အညံ့ခြင်းပါ တူခဲ့ကြတာတွေ
ကျောင်းသွားချိန်တိုင်း ကုက္ကိုလ်ပင်တန်း ရေကန်လမ်းမှာ ကြွေကျခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ခြေလှမ်းအမှားတွေ
အထက်တန်း ကျောင်းသားလေးရဲ့ ကျောင်းဆင်း ကျောင်းတက်ချိန်တွေ
ကျောင်းပြေးချိန် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အိမ်ယာတွေ
ဆံသဆိုင်အဟောင်းလေးထဲက ငေးမျှော်မှုတွေ ဒေါမနဿတွေ
ပရဟိတ ယက်ကန်းရုံဘက်က စည်းချက်မမှန်တဲ့ ခြေလှမ်းနဲ့ အမှတ်မထင်တွေ့ဆုံမှုတွေ
တို့ချစ်မောင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေ ထိုင်မျှော်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ချာလီထီးလေးတလက်
ရင်ခွဲရုံလမ်းကြားက ဖြတ်သွားဖြတ်လာ မျက်စောင်းတွေ
ကျနော့်ဆန္ဒအတွက် သူ့ဝတ်လွှာတွေ ဖွင့်ပြဖို့ ၀န်မလေးခဲ့တာတွေ
ရှမ်းတောင်တန်းရဲ့ နီလွင်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမှုတွေ
သီတာဒေ၀ီရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာကိုမြင်မိရာက စွဲလမ်းခဲ့သလိုမျိုး
သင်္ဘောကုန်ချိန်ထိ ဖွင့်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးထဲက ထွက်ကျလာတက်တဲ့
ဂါဝန်လေးတဖားဖားနဲ့ အမှတ်မထင်ကြည့်သွားခဲ့တဲ့ အကြည့်တွေ။
ပုခုန်းချင်း ခေါင်းအပ်လို့ အိပ်ခဲ့တဲ့အထိ ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့အိမ်
ကျနော့််ရဲ့ စားအိမ် သောက်အိမ်
ကျနော့်အတွက် စာအုပ်တွေ အသိုက်ဖွဲ့ထားတဲ့အိမ်
ကက်ဆက်မရှိတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ တေးချင်းတွေနားထောင်တဲ့ နေရာ
မင်းလည်း ငါ့အတွက် ဟင်းလျာတွေချက်ခဲ့ဖူးမယ်ထင်ရဲ့။
ပန်းပဲဖိုက ဖိုထိုးသံလို မီးလျှံတရဲရဲရင်ခုန်သံတွေ
အဲဒီလောက်အထိ အချစ်တွေက တံခွန်ထူနေလိမ့်မယ်လို့
အနှစ် ၂၀ ကျော်သည့်တိုင် အခိုင်အမာသိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့
…… …… …… ……။
တမြို့လုံးကို အိပ်သွန်ဖာမှောက် လျှောက်သွားတက်တဲ့
ခပ်ပေပေ ခပ်တေတေ ကောင်လေးတယောက်
ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသတွေ သိပ်များတဲ့ ကောင်လေးလို့
အဝေးရောက် ဘီလူးတကောင်ရဲ့ အလွမ်းကို သီဖွဲ့ထားတဲ့
မာဃဒေ၀ ကဗျာကို ရွတ်ဆိုပြလိုက်ချင်ကြသတဲ့
အဲဒီကဗျာလေးဟာ တို့ဘ၀နဲ့အတူ အသားကျ
မြို့ငယ်လေးရဲ့ အပျော်တမ်း တီးဝိုင်းနဲ့အတူ
ဆီမီးတွေ မြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့။
လမ်းသစ်ဦးဆိုတဲ့ စာဖတ်ဝိုင်းကို ထားခဲ့တယ်
ခရမ်းပြာ အပျိုမသို့ တမ်းချင်းဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ထားခဲ့တယ်
ကမ္မဇလေရဲ့ ရင်ခုန်သံများဆိုတဲ့ စုပေါင်းလက်ရေးကဗျာစာအုပ်လေးကို ထားခဲ့တယ်
လေဆိုင်ဆုံလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကို ထားခဲ့တယ်
ကျနော် ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မ၀င်စားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေကို ထားခဲ့တယ်
မှတ်စု အတိုအထွာတွေကို ထားခဲ့တယ်
ရှေ့ကြည့် - သတိ - သက်သာ မှသည်
ယိမ်းခါ နွဲ့ခါ ပွင့်လာခဲ့တယ်
တောင်ပေါ်သူလေးရေ …. ဆရာမလေးရေ
ဒီရင်မှာလေ မိုးဖွဲ မိုးဖွဲလေးရွာစွေ။
သူပုန်မှော်အောင်ဖို့အတွက် တဘ၀လုံး ပုံအောခဲ့သူအတွက်
တဘ၀လုံး ပုံအောပြီး ချစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်တွေ
၃၁ - ၅ - ၂၀၁၅
Posted by ဖိုးညို at 6:27 PM No comments:
သင်း (ဒင်း) တို့ကို မီးတိုက်လိုက်ကြ
ပြီးတော့ … ပြာပုံဘ၀ ကျတဲ့အထိ မိးတိုက်လိုက်ကြ။
စပါပင် … စိမ်းလဲ့
Posted by ဖိုးညို at 8:07 PM No comments:
ရေတွေ … ရေတွေ စိုကုန်ပြီဆိုတဲ့ သင်္ကြန်မှာပေါ့
Posted by ဖိုးညို at 8:04 PM No comments:
Posted by ဖိုးညို at 8:03 PM No comments:
ဘ၀တပါးသို့ ပြောင်းသွားလေသူ ညွန့်ညွန့်တို့ သနပ်ခါးလိမ်း၊ ပန်းပန်ပြီး ဓာတ်ရှင်မင်းသားလုပ်နေသည့် အခါသမယတွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တည်း။
အသင်စာရှု့သူအား အတူးနှင့် ဦးစွာ မိတ်ဆက်ပေးဦးအံ့။ အတူးက တမီးလ်လူမျိုး၊ ခရစ်ယာဉ်ဘာသာဝင်။ အနှီးအတူးကား အလုပ်ကို သေသေချာချာလုပ်သူမဟုတ်။ ၁၀၉၊ ၁၁၀။ အတူး သေသေချာချာ လုပ်သည်ကား သူ့အဖေ ဈေးထဲမှာ ဖွင့်ထားသည့် ကျူလီယာဆိုင်ကို အမေဖြစ်သူ ချက်ပြုတ်ခူးခပ် ထည့်ပေးလိုက်သည့် ထမင်းချိုင့်ကို သွားပို့သည့် အလုပ်သာလျင်ဖြစ်၏။ ထမင်း သွားပို့တိုင်းလည်း ဈေးနားမှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် တမေ့တမော ထိုင်တတ်သည့် အတူးတည်း။ သို့ဂလို အတူးတယောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုတိုင်း အကြောင်းပေါင်းစုံကို ဟောင်ဖွာ၊ ဟောင်ဖွာနဲ့ ပြောတတ်သည်လည်း တဖုံ။
တနေ့သ၌ ထမင်းပို့ပြီးသော အတူးတယောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ရောလာလေ၏။ ပွားဖက်တော်များ ပေါ်မလာ၊ အမျှော်ကြာလာသဖြင့် ကောင်တာမှာ ၀ပ်လျက်စံပါယ်နေရှာသော တနေတာ အလိမ်အညာ စုစည်းချက်ဟု ခေါ်သော်ရသည့် မြန်မာ့မလင်းသတင်းစာကြီးအား ယူ၍ ဖတ်လိုက်မိ၏။ ဤကား အကုသိုလ် ကိုယ်ထင်ပြခြင်းတည်း။
အကြင်သတင်းစား၌ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ဆဲရေးထားသည့် ဆောင်းပါးကိုဖတ်မိပြီး အတူးရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အန်အယ်လ်ဒီပါတီဟာ လူထုပါတီဖြစ်ကြောင်း၊ န ၀ တ သာလျင် နဝေတိမ်တောင်ကောင်တွေ ဖြစ်ကြောင်း သို့ဂလိုအော်ကြီးဟစ်ကျယ် ပွားလိုက်၍မှ မကြာ၊ လွယ်အိပ်ကိုယ်စီလွယ်ထားသည့် လူနှစ်ယောက် အတူးနားရောက်လာပြီး သူတို့နှင့်လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်သွားလေသတည်း။ အကြင်နေ့မှစ၍ အတူး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မရောက်တော့။ ၁၅ ရက်လောက်ကြာမှ အတူးသတင်းကို ကြားရသည်ကား “အတူး ဆေးရုံတတ်နေရပြီ”
အထူးအဆန်းဆို ၀ါသနာပါသည့် မောင်ကန့်လန့်တို့ ဆေးရုံအထိလိုက်ပြီး အတူးနဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်ပါတော့ တယ်။
“အနှီး ခေါ်ဆောင်သွားသည့် လူစိမ်း ၂ ဦးမှာ ထောက်လှမ်းရေးများ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိအား ထောက်လှမ်းရေး သီးသန့် အချုပ်ခန်းထဲတွင် ၁၄ ရက်ခန့် ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း၊ အကြင်အရပ်၌ မည်သူမျှမရှိပါကြောင်း၊ မိမိ အား မည်သူမျှလည်း စကားစမြည်လာရောက် ပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်း၊ မနက်စာ - ညစာအား လူတစုံတယောက်မှ မှန်မှန်လာပို့ကြောင်း၊ မိမိအား ဘဇာ့ကြောင့် ချုပ်ထားသည်ကို မိမိမှ သိလိုသဖြင့် မေးသော်လည်း တစုံတရာ ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်း၊ သို့ကလို ဖြစ်သဖြင့် မိမိမှ ထိုသူအား ဆဲဆိုသောအခါ မည်သည်မျှမပြောမဆိုပဲ ခါးပတ်ချွတ်ကာ ရိုက်နှက်၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါကြောင်း၊ ဤသို့ဖြင့် ၁၄ ရက်မြောက်နေ့တွင် သကောင့်သား ထောက်လှမ်းရေး ၅ ဦး ရောက်ရှိလာပါကြောင်း၊ မိမိအား “အိမ်ပြန်ချင်ပြီလား”ဟု မေးပါကြောင်း၊ မိမိမှလည်း ရိုးသားစွာဖြင့် “ပြန်ချင်ပြီ”ဟု ဖြေကြားလိုက်ပါကြောင်း၊ သကောင့်သား တဦးမှ “မင်းဘောလုံးကန်တတ်သလား” ဟု မဆီမဆိုင်မေးပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်လည်း ရိုးသားစွာဖြင့် “ကန်တတ်ပါတယ်” ဟု ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ထိုရောအခါ သကောင့်သားများမှ ဘောလုံးကွင်း ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ထားသော ကွင်းတခုထဲသို့ မိမိအား ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း၊ သကောင့်များမှ “ဂိုးတိုင်ထဲသို့ ဘောလုံးဝင်အောင် ကန်နိုင်ပါ့မလား” ဟု မေးကြောင်း၊ ဂိုးတိုင်အကျယ်ကြီးထဲသို့ သိပ်မဝေးသေနေရာမှ ဘောလုံးကို ကန်သွင်းရမည်ဖြစ်သောကြောင့် “ကန်သွင်းနိုင်ပါတယ်”ဟု မိမိမှ ဖြေဆိုမိပါကြောင်း။ မိမိအား ကန်သွင်းစေပါကြောင်း။ မိမိမှ ကန်သွင်းလိုက်ကြောင်း၊ ဘောလုံးသည် ဂိုးတိုင်ထဲသို့ တည့်တည့်မတ်မတ်ပင် ၀င်ရောက်သွားပါကြောင်း၊ သကောင့်သားများမှ “ဒီလောက်နီးနီးလေးကနေပြီး ဒီလောက်ဂိုးအကျယ်ကြီးထဲ ကန်သွင်းတော့ ၀င်တာပေါ့ကွ၊ မင်းမျက်စိကို အ၀တ်စီးထားရင် ကန်လို့ဝင်ပါမလားဟု” စကားနာထိုးကြောင်း၊ မိမိမှလည်း “ရပါတယ်”ဟု ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း၊ သကောင့်သားတဦးမှ မိမိမျက်စီအား အ၀တ်စည်း ပေးပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ဘာမှ မမြင်ရတော့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မည်သည့်အနေအထားမှဖြစ်စေ မိမိကန်သွင်းလိုက်သည့် ဘောလုံးသည် အနှီး ဂိုးတိုင်ထဲသို့ ၀င်ကို ၀င်ရမည်ဟု ရိုးသားစွာ ယုံကြည်မိပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဘောလုံးကန်ပြီးလျင် ပြန်ရမည်ဆိုသဖြင့်လည်း ရိုးသားစွာ ၀မ်းသာမိပါကြောင်း၊ သကောင့်သားတဦးမှ “ကန်” ဟု အော်လိုက်ပါကြောင်း၊ မိမိမှလည်း ၀မ်းသာခြင်း ကြီးစွာဖြင့် အားရပါးရ ကန်သွင်းလိုက်ရာ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပါကြောင်း” အတူးမှ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အသို့နည်း။ မျက်စီအ၀တ်စည်းပြီး ဘောလုံးကန်သဖြင့် ခြေထောက်ပတ်တီးစီရသည့်အဖြစ်အား ဆက်စပ် စဉ်းစား၍မရဖြစ်သွားရသည်။ အတူးပြောသည့် နဝေတိမ်တောင်ကောင်တွေထဲ ကိုယ်ပါ ပါသွားပလားဟု တွေးမိရင်း ၀မ်းတောင်နည်းမိရသည်။ အတူးက သတင်းစာဆရာကြီးများအနေဖြင့် မေးမြန်းလိုသည်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းမရှိသော်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညံ့ကြောင်း ၀န်ခံပြီး မရှင်းသည်များကို အတူးအား မျက်နှာပူပူဖြင့် မေးရတော့သည်။ အတူးဖြေသည်ကား …
သူတို့က ကန်ဆိုတော့ ကျနော်လည်း အိမ်ပြန်ချင်ဇောနဲ့ တအားကျုံးကန်လိုက်တာ
သူတို့က ဘောလုံးအစား သံလုံးကြီး ချထားတော့ ကျနော့်ခြေထောက် သွင်သွင်ကျိုးရပါရောလားဗျာ”
Posted by ဖိုးညို at 8:00 PM No comments:
သူ့ ဟိတ် ကို ဇစ် ဆွဲပိတ်လိုက်တယ်၊
အဲဒီ ဟိတ် ထဲမှာ
အဲဒီ ဟိတ် တလုံးတည်းနဲ့ ထည့်သွားနိုင်တာကတော့
ပြီးတော့ …. ကျေကျေနပ်နပ်
ဒေါင်းအိုးဝေ - အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၆)၊ ဇွန် - ဇူလိုင် - ၂၀၀၄
Posted by ဖိုးညို at 6:51 PM No comments:
ငါ့ဆီ နင်ပြန်လာရင် ဒီလိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး …
(၁၉၆၀ - ၂၀၀၅) ရယ်။
နင့်သားကို စိတ်ချသွားပြီလား ဦးဘုန်းနိုင်ရဲ့။
နံဘေးနားမှာ ထိုင်နေတ့ သမီးအကြီးမကိုကြည့်လိုက်။
နင်ကျင်ရပါတယ် … ရဲဘော်ကြီးရယ်။
အလွမ်းတွေ ချွေနေတဲ့ ဒေါ်ကူးရေ …
Posted by ဖိုးညို at 6:26 PM No comments:
ပုန်းကွယ်နေသည့် မျဉ်းတကြောင်း၏ မေလအတွင်း၌
ထွန်းပစမ်းသပ်မှု၏ ရောင့်ရဲဖွယ် နေ့ငယ်ငယ်များ
သဲတရှုပ်ရှုပ် နှင်းတပေါက်နှင့်် ပန်းပွင့်တောင်တန်းများ
ရင်ခွင်တလျှောက် စိမ်းညိုစွာ အလင်းသိုခဲ့။
Posted by ဖိုးညို at 5:56 AM No comments:
Labels: poems of the ladys
“ကော်လာဝါး” တွေက ရှင်အောင်လုပ်မပေးဘူးလား “အမိုး”တဲ့။
၀ရုန်းသုန်းကား ကမ်းပေါ်ကို ထိုးတက်ကြ
လွှမ်းမိုးကြ … ပြီးတော့လည်း …
နယ်ချဲ့ခံရဖို့ နီးစပ်နေသူ ကန်တဲ့ပွဲလို့ မှတ်ချက်ချ
ခေတ်သစ်ကို ထူထောင်သူလို့ပြောမှ မှန်မယ်
မလွှဲသာ မရှောင်သာ တိမ်းစောင်းချေတော့မယ်။
ကော်လာဝါး (ကရင်စကား) ကုလားဖြူ
အမိုး (ကရင်စကား) အမေ
Posted by ဖိုးညို at 6:14 PM No comments:
အလွမ်းတွေ ပေါင်းထူလွန်းတဲ့ ယာခင်းပါကွဲ့။
(ဒါပေမယ့် …. အဲဒီအနီရောင်ဟာ
တကယ့် တကယ် ကိုယ်ချစ်တာက - အပြာ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းက သေနတ်သံတွေ ကြားယောင်
ကိုယ့်နိုင်ငံ တောင်ယာထဲက သွေးတွေကို မြင်ယောင်
မီးခိုးမဆုံး၊ မိုးမဆုံး ယမ်းငွေ့တွေ ဖုံးလွှမ်း
ဧကန်တရားတွေ ထူးခတ်ခံထားရတဲ့ အကျဉ်းသား
ကူးစက်ရောဂါတွေ ထင်တာထက် များပြားနေတယ်။
အလွမ်းတွေ ပေါင်းထူလွန်းတဲ့ ယာခင်းပါ
ချစ်ရသးတွေရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ကြားနာချင်တယ်။
Posted by ဖိုးညို at 6:11 PM No comments: